हिउँदे बालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गरिएको
धानपछि मुख्य अन्नबालीमा गहुँ र मकै पर्छन् । धान भित्र्याइसकेपछि चिसो मौसम शुरु हुने हुदाँ किसानले पनि खासै यसतर्फ ध्यान नदिएका रहेछन् । त्यसैले फाट्टफुट्ट रुपले गहुँ र मकैको खेती हुने गरेको रहेछ ।
धानको तुलनामा गहुँ र मकैमा थोरै पानी अनि कम हेरचाह र मेहनत भए पुग्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल कृषि कम्पनीले हिउँदे बालीमा माटोको प्रकृति हेरी गहुँ र मकैको लागि किसानहरुलाई हौंस्यायो । त्यसको परिणाम हो– सुनसरी जिल्लाको दक्षिण चिमडी गाविसदेखि उत्तर एकम्बा गाविससम्मका ४ वटा सहकारीले गरेको हिउँदे खेती । ती चार सहकारीहरु हुन् — चिमडीको बिर्जुधामी, तनमुना गाविसको सिर्जना कृषि सहकारी, औराबनी गाविसको सामुहिक कृषि सहकारी र एकम्बा गाविसको उर्जा कृषि सहकारी ।
२०७० को गहुँको परीक्षणपछि यी सहकारीहरुसँग भएको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हामीले दुइवटा समस्या पहिचान गर्यौं ।
१. खाद्यान्नबालीमा किसानहरुको खर्च धेरै तथा आम्दानी कम देखिनु साथै खेति शुरु गर्ने बेला चालुपूँजीको अभावमा समयमै मलखाद, बीउ उपलब्ध नहुन । यी सबै कारणले उत्पादनमा र्‍हास आउनु स्वाभाविक नै हो ।
२. खाद्यान्न उत्पादन हुने बितिकै पैसाको अभावमा तुरुन्त सस्तो दरमा बिक्री गर्नुपर्ने ।
यी समस्याहरुको समाधान वाणिज्य बैंकहरुबाट सस्तो एवं सुलभ ऋण बाहेक अरु विकल्प छैन । यसैगरि वाणिज्य बैंकलाई किसानहरुले ऋण तिर्ने-नतिर्ने कुराको त्रास । यसका लागि किसानहरुले ऋण बराबरको घरजग्गा धरौटीमा राख्नुपर्ने ।
हामीले यस्ता ऋणको सुरक्षाका निम्ति निम्न विश्लेषण गर्यौं ।
क) यो ऋण संस्थागत ऋण हो । किसानहरु आधिकारिक सहकारीका साधारण सदस्य हुन् र सहकारीप्रति जवाफदेहिताको सम्पूर्ण भरपाई, तमसुक गरेका हुन्छन् । सहकारीहरुका कार्यकारीको जमानीमा वाणिज्य बैंकले ऋण दिने हो । यसको प्रारम्भीक अनुगमन नेपाल कृषि कम्पनीले गर्नेछन् । सहकारी, बैंक र नेपाल कृषि कम्पनीको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार यो कार्यक्रम ऋणमा सञ्चालन हुनेछ ।
ख) हरेक सहकारीमा १०० देखि १५० किसान परिवारको संलग्नता रहनेछन् ।
ग) चालुपूँजी र अन्न भण्डारण दुवैको बिमा हुने भएकोले यदि केहि गरि भविष्यमा बाली नोक्सान भएमा ऋण बिमाबाट असुल गरिने ।
यसैकारण अब किसानहरुको उत्पादकत्व बढाउन, कम्तिमा वर्षको दुई बाली खेति गर्न र आफ्नो उत्पादन भण्डारण गरि बैंकिंग गरेर अधिकतम मूल्य पाउन वाणिज्य बैंकको ऋण प्रयोग नगरी अर्को उपाय रहेन ।
हामीले यहि उदेश्य हासिल गर्न २०७१ सालको हिउदे बालीमा करिब ७५० बिगाहाका किसानहरुलाई यी चार सहकारीहरु मार्फत आवद्ध गरायौं र आवश्यक यन्त्रहरु व्यवस्था गराई दियौं ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई यस व्यवसायिक स्तरको कार्यक्रममा पहिले विश्वस्त हुन अति जरुरी थियो । त्यसैकारण बुध्द एयरको प्रवन्ध निर्देशक तथा नेपाल कृषि कम्पनीका सञ्चालक श्री वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको व्यक्तिगत जमानीमा रु. ५ करोड बराबरको ऋण बैंकले स्वीकृत गर्‍यो । त्यसमध्ये रु. १ करोड ३ लाख ४५ हजार रुपैयाबराबरको ऋण प्रवाह भइसकेको छ । उक्त रकम ६०० बिगाहा गहुँ खेती र १५० बिगाहामा मकै खेतीको लागि खर्च भएको छ । त्यस्तै ५११ टन धान भण्डारण गरि १ करोड ४ लाख ७५ हजार रुपैँयाको बैंकिंग गरीएको छ । यस कार्यक्रमलाई टेवा दिने र संस्थागत सुपरिवेक्षण गर्ने एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष श्री वि.के. श्रेष्ठ, मूख्य कार्यकारि अधिकृत श्री ए.के. अल्हुवालिया, सहायक महाप्रवन्धक श्री राजेश गौतम र विशेष गरि विराटनगर शाखाका व्यवस्थापक श्री श्वालिद स्थापितज्यूलाई मुरी–मुरी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
अब हामी यस कार्यक्रमको अन्तिम नतिजाको प्रतिक्षामा छौँ ।